Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTamas
I-Balatonszemes lukhetho oluhle kwiinkalo ezininzi zokuchitha iiholide. Yindawo esembindini ikunika amathuba amaninzi okufikelela ngokulula kwaye ngokukhawuleza ezinye iilali kunye neebhafu ezishushu ebumelwaneni kunye necala lasemntla aswell.Indlu inokufumaneka kunxweme lweLake Balaton, emelene nomnyango wonxweme lwendawo. Imalunga neemitha ezingama-200-250 kude nezibuko kunye nombindi welali.
I-Balatonszemes lukhetho oluhle kakhulu kwiinkalo ezininzi zokuchitha iiholide. Indawo esembindini ikunika amathuba amaninzi okufikelela ngokulula nangokukhawuleza kwezinye iilali kunye neebhafu ezishushu ebumelwaneni nakwicala elingasentla ngokunjalo. Ukusuka kwizibuko ngokufuthi ukushiya iinqanawa kwiindawo ezibonwayo zonxweme olusemantla nakumazantsi echibi. Ukuba ufuna ukuphumla, uzitshaje kwakhona, ubandakanyeke kwimidlalo okanye ekulobeni, akufuneki ukuba uyishiye ilali kwaphela. Indlu kwimifanekiso inokufumaneka kunxweme lweLake Balaton, ejongene nomnyango wonxweme lwendawo. Imalunga ne-200-250 yeemitha kude nezibuko kunye nombindi welali, apho iivenkile kunye neendawo zokuzonwabisa zinokufumaneka. Ulwandle olungahlawulisiyo lukwafumaneka ngaphakathi kweemitha ezili-100.
Kukho amagumbi amabini endlwini, nganye ineebhalkhoni ezimbini kunye nokujonga echibini. Iiflethi zahluliwe. Igadi kuphela ekwabelwana ngayo apho iimoto zingabekwa khona. Indlu nganye inefenitshala epheleleyo kwaye ixhotyiswe kakuhle. Ekhitshini unokufumana i-coffee-machine, i-toaster, i-oven microwave, isitovu sombane, ifriji kunye nazo zonke izitya kunye neziqholo. Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngebhabhu kwaye lihlulwe kwindlu yangasese. Igumbi lokuhlala kunye ne-1-2 yokulala inika indawo eyaneleyo yokuhlala ekhululekile yabantu abayi-1-6. I-Sat-TV iyafumaneka kwiflethi nganye. Kwibalcony ejonge emazantsi nakumantla ungaphumla, uthathe ilanga, utye, kwaye ngokuhlwa yindawo efanelekileyo yokuthetha ixesha elide ecaleni kweeglasi zewayini.
Umbuki zindwendwe ngu- Tamas
Inombolo yomthetho: EG19021305
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Balatonszemes